ကော့သောင်း၌ ကျောက်မီးသွေးစက်ရုံ ရပ်တန့်ရေး ဆန္ဒထုတ်ဖော် ~ အနုပညာအိမ်လေး
ကော့သောင်း၌ ကျောက်မီးသွေးစက်ရုံ ရပ်တန့်ရေး ဆန္ဒထုတ်ဖော် အောက်တိုဘာ(၁၇)ရက်နေ့၊၂၀၁၂ခုနှစ်။
တနင်္သာရီတိုင်း ကော့သောင်းမြို့နယ် ရွှေပြည်သာရပ်ကွက်အနီးရှိ ကျောက်မီးသွေးစက်ရုံအား ရပ်တန့်ရန် ဆန္ဒထုတ်ဖော်မှုတစ်ရပ် အောက်တို ဘာလ(၁၆)ရက်နေ့က ဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း သိရှိရသည်။
“ပြည်သူတွေအနေနဲ့ ကျောက်မီးသွေးကနေဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ ဒီမီးခိုတွေ ရှုမိမယ်၊ ပြာမှုန့်တွေကို မျက်လုံးထဲ မှာ ခတ်မိမယ်၊ ရေထဲမှာ ပျော်ဝင်မိမယ်ဆို အဲ့ဒီဟာတွေက အဆိပ်ဖြစ်လာတယ်၊ ၆ နာရီကနေ၈ နာရီအထိ ရှုမိမယ် ဆိုလို့ရှိရင်ဦးနှောက် ဆဲလ်ကြောတွေ သေးငယ်သွားပြီး ထိုင်းမှိုင်းသွားစေတာတို့၊ ပြီးလို့ရှိရင် ခေါင်းမူးတာ တို့ အော့အန်တာတို့ အဲ့ဒါတွေ ဖြစ်မယ်၊ အမျိုးသမီးတွေ ရှူရှိုက်မိမယ်ဆိုလို့ရှိရင် အမျိုးသမီး
တွေရဲ့ သန္ဓေသားတွေ ပျက်စီး သွားမယ်၊ ပြည်သူ လူထုတွေ အသက်ဆုံးရှုံးမှုတွေ ရှိလာနိုင်တဲ့ အတွက်
ကျွန်တော်တို့ ဆန္ဒပြတာ”ဟု ဆန္ဒထုတ်ဖော်မှု၌ ဦးဆောင်ပါဝင်သူတစ်ဦးက ပြောသည်။
လူနေရပ်ကွက်အနီးတွင် သန်းဖြိုးသူသတ္ထုတူးဖော်ရေးကုမ္ပဏီလီမီတက် တည်ဆောက်ထားခြင်းကြောင့် ဒေသခံများအတွက် အန္တရာယ်ကျရောက်မှုများ ဖြစ်နိုင်သောကြောင့် စက်ရုံအား ရပ်တန့်ပေးရန် ဆန္ဒထုတ် ဖော်ခြင်းဖြစ်ကြောင်းကိုလည်း သိရသည်။
အဆိုပါ ကော့သောင်းကျောက်မီးသွေးစက်ရုံ ကန့်ကွက်ဆန္ဒပြခွင့်အား မြို့နယ်အာဏာပိုင်များအနေဖြင့် (၂)နာရီသာခွင့်ပြုခဲ့ကြောင်း ဒေသခံများထံက သိရသည်။
“ထိုင်းနိုင်ငံမှာ လုပ်လို့မရလို့ သူတို့က မြန်မာနိုင်ငံမှာ လာလုပ်တဲ့ဟာကို လုံးဝ ကန့်ကွက်ဆန္ဒပြတာ၊ ကျောက်မီးသွေး စက်ရုံလုံးဝ ဖျက်သိမ်းပေးဖို့ တောင်းဆိုတာ” ဟု ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီမှ ဦးသန်းထွန်းက ပြောသည်။
အဆိုပါစက်ရုံအနေဖြင့် ထိုင်းနိုင်ငံရှိ PTT ကုမ္ပဏီ အတွက် မြန်မာနိုင်ငံ၌ လာရောက်လုပ်ဆောင်နေခြင်း ဖြစ်ကြောင်း ကိုလည်း ၄င်းက ဆက်ပြောသည်။
အဆိုပါဆန္ဒထုတ်ဖော်မှုတွင် ကော့သောင်းမြို့ပေါ်ရှိ ရပ်ကွက်များအတွင် လှည့်လည်ဆန္ဒထုတ်ဖော်ကာ မွန်ဒေသလုံး ဆိုင်ရာပါတီ၊ ဒီမိုကရေစီပါတီ(မြန်မာ)နှင့် ပြည်သူ (၅၀)၀န်းကျင်ပူးပေါင်းပါဝင်သည့် ဆန္ဒ ထုတ်ဖော်မှုဖြစ်သည်။
သန်းဖြိုးသူ သတ္ထုတူးဖော်ရေးလုပ်ငန်းကုမ္ပဏီပိုင် ကျောက်မီးသွေးစက်ရုံအား ၂၀၁၁ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ ကတည်းက စတင် တည်ဆောက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး မြို့နယ်အတွင်းရှိ အချို့နေရာများသို့ အောက်တိုဘာလ လဆန်းပိုင်းကစ၍ တစ်ယူနစ် ကျပ် ၂၀၀ နှုန်းနှင့် လျှပ်စစ်မီးဖြန့်ဖြူးရောင်းချနေကြောင်းကိုလည်း ဒေသခံများက ဆိုသည်။
ကော့သောင်းမြို့၌ အစိုးရ လျှပ်စစ်မီတာခ တစ်ယူနစ် ၄၂၅ ကျပ် ပေးဆောင်နေရချိန်တွင် ကျောက်မီးသွေး စက်ရုံက လျှပ်စစ်မီတာခအား ဈေးနှုန်းသက်သာစွာဖြင့် အသုံးပြုနေရသော်လည်း သဘာဝဘေးအန္တရာယ် ပျက်စီး ဆုံးရှုံးမှုများ ကြောင့် ကန့်ကွက်ဆန္ဒထုတ်ဖော်ရခြင်းဖြစ်ကြောင်းကိုလည်း ဒေသခံတို့က ဆိုသည်။
ကျောက်မီးသွေးစက်ရုံရပ်တန့်ပေးရန်အတွက် ပြီးခဲ့သည့် ဧပြီလအတွင်းက ပြည်သူများလက်မှတ်ထိုး၍ သမ္မတထံ စာရေးသား တင်ပြခဲ့ကြောင်းသလို သြဂုတ်လအတွင်းကလည်း ဒေသခံ (၆၀၀)ကျော်က လက်မှတ်ထိုး၍ ထပ်မံတင်ပြ ခဲ့သော်လည်း ထူးခြားမှုမရှိခဲ့ပေ။
သတင်း - အောင်အောင်(မြစ်မခ)
နိုင်ကျဉ်း သက်ကြီး ပူဇော်ပွဲနှင့် ခြွင်းချက်မရှိ န...
တော်ဝင်ပရိဘောဂစက်ရုံမှ နေ့စားအလုပ်သမားများ ဆန္ဒထုတ်...
KNPP ၏ အပစ်အခတ် ရပ်စဲရေး အပေါ် KCSN ကွန်ယက်က ဝေဖန်
၈၈ မျိုးဆက် ကျောင်းသားခေါင်းဆောင် ဦးကိုကိုကြီးမှြ...
မလေးသွားမှောင်ခိုဘုတ် နစ်မြှုပ်၍ (၁၂၈) ဦးအနက် (၁၂၂...
အကြမ်းဖက်မှုပဋိပက္ခ ဖြစ်စဉ်များမှ လက်နက်ငယ် (၁၈၀)လက်...
ရန်ကုန် ကလေးဆေးရုံကြီး၌ ပြုလုပ်မည့် ဆေးဝါး၊ အာဟာရ ...
တစ်ဦးချင်း ကုန်သွယ်နိုင်မည့် ကတ်များ ပြုလုပ်ပေးမည်...
စစ်တွေရှိ တပ်များမှာ ပြည်ထောင်စုတပ်များ မဟုတ်ဟုပြည...
"၂ဝ၁၂ သည် ၈၈ နောက်ပိုင်း ရှို့မီးကြောင့် မီးလောင်မှု...
ရခိုင်ဒေသ စစ်အုပ်ချုပ်ရေး ပြဋ္ဌာန်းရန် လတ်တလော အစီအစ...
ရန်ကုန်မြို့တာ်၏ အနာဂတ်စီမံကိန်းအတွက် မြို့ဧရိယာကိ...
ထားဝယ် အထူးစီးပွားရေးဇုန် စီမံကိန်းအတွက် အီတာလျံ-ထ...
ရခိုင်ဒုက္ခသည် ၃၀၀၀ ခန့် မြောက်ဦး ဘုန်းတော်ကြီးကျော...
ပုဂံညောင်ဦး ဒေသတွင် ပြည်တွင်းပြည်ပ ခရီးသွားအများ အ...
ကောင်းကျိုးကိုယ်၌ တည်စေသောဝ် - နာရေးကူညီမှုအသင်း(ရန...
ဓမ္မရံသီ ၏ ကောင်းမှုတော် - နာရေးကူညီမှုအသင်း (ရန်ကုန်...
သီတင်းကျွတ်လပြည့်နေ့၌ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး အတွင်းရ...
ရပ်ကွက် အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရွေးချယ်ပွဲ ကြံ့ခိုင်ရေးလွှ...
သီတင်းကျွတ်အခါသမယ FFSS မှ ဆရာ/ဆရာမများတွေ့ဆုံဂုဏ်ြ...
ကော့သောင် တဘက်ကမ်း ထိုင်းနိုင်ငံ ရနောင်းမြို့မှာ က...
စစ်မှုထမ်းဟောင်း တစ်ဦး မှ သမ္မထံ တိုင်ကြားစာပို့
KIO နှင့် ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲကို နိုင်ငံရေးန...
ကျောက်နီမော်တွင် ရဲပစ်ခတ်မှုကြောင့် တစ်ဦးသေ၊ တစ်ဦး ...
UNODC , RCSS နှင့် အစိုးရ မူးယစ်တိုက်ဖျက်ရေး သဘောတ...
နိုင်ကျဉ်းသက်ကြီးပူဇော်ပွဲနှင့် လွတ်မြောက်ရေး တောင...
ငြိမ်းချမ်းရေး ဆွေးနွေးရန် ကမ်းလှမ်းစဉ်အတွင်း တပ်မ...
ညီနေမင်း ( နည်းပညာ ) ရန်ကုန်၊ နေပြည်တော် နှင့် အထ...
ပုဂံ မှာဆေးရုံလိုအပ် ( ရုပ်သံ-သတင်း )
ဖိုးခွား တာဝန်ကျေပါတယ် အမေရယ်
လန်ဒန်ရောက် မြန်မာများမှ BG မှ ဆင်းရဲနွမ်းပါး ကလေး...
မိုးထိ မိုးမိ ရွှေလုပ်သားများ အမျိုးသားကြီးပွားတိုး...
ကျွန်းတော သမ၀ါယမ ဆန္ဒပြ ( ရုပ်သံ-သတင်း )
ရခိုင်ပြည်နယ် ကယ်ဆယ်ရေး တွေ့ဆုံဆွေးနွေး ( ရုပ်သံ-သ...
ရခိုင် ပဋိပက္ခကြောင့် လူ နှစ်သောင်းနှစ်ထောင်ကျော် အ...
ဖုတ်ဖရ မြို့ကားမှောက်မှု မြန်မာ ၃ ဦးသေ၊ ၂၀ ကျော် ဒဏ...
ပြည်နယ်အတွင်း သတင်းဖြစ်က ရခိုင်ကွန်ယက်က ဖြေကြားပေး...
ရခိုင်ပြည်နယ် ကို တပ်မတော် စတင်အုပ်ချုပ်
ရေကောင်းရသန့်များ ဆယ်စုနှစ် တစ်ခုကျော် မရ၍ ယုဇနဥယျ...
မီးရှို့ခံ ရွာများအား စစ်တပ်မှ ခြိမ်းခြောက်ပြီး ငေ...
ပထမဆုံး မြန်မာ့ရုပ်ပုံလွှာ စာပေ နှင့် ဓါတ်ပုံ ဆောင်...
နယူးယောက်မှာ ယှဉ်ပြိုင်နေတဲ့ မြန်မာမော်ဒယ် Nida T...
ထိုင်းနိုင်ငံ ဟာချိုင်ဒေသ၌ အောက်တိုဘာလ(၃၁)ရက်နေ့ တ...
သက်ကြီး နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားဟောင်းများကို ဂါရ၀ပြုက...
Shwelone.com (ရွှေလုံး) စာမျက်နှာကို ပြင်ဆင်မွမ်းမံ...
ရွှေည၀ါဆရာတော် အရှင်ပညာသီဟက လက်ရှိ ရခိုင်ပြည်နယ် အ...
စိုးရိမ်ဖွယ်ရှိနေသည့် ဒုက္ခသည် ကျောင်းသားများ၏ ပညာေ...
အောက်တိုဘာလ ၁၈ ရက်နေ့ထုတ် 7DayNews ဂျာနယ်ပါ ‘ဆောင်...
ဗိုလ်ချုပ် နှင့် ဒေါ်စု ပုံမီးပုံးများအား ဒီလှိုင်းက...
ရန်ကုန် စီးပွားရေးတက္ကသိုလ်နှင့် မြန်မာနိုင်ငံ ဘဏ်သ...
မန္တလေး အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လေဆိပ်တွင် ဆိုက်ရောက်ဗီဇာ ...
ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် လတ်တလော ဖြစ်ပေါ်နေသော ပဋိပက္ခများအ...
တဆင့်အလှူအတွက် တဆင့်အမျှဝေခြင်း - နာရေးကူညီမှုအသင်း...
Temptation-4 (London) တေးဂီတဖျော်ဖြေပွဲမှ စုပေါင်း...
ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် ပွင့်လင်း လူ့အဖွဲ့အစည်းဖော်ဆော...
နဂါးနီစာအုပ်အသင်း စိန်ရတု အခမ်းအနား ဖိတ်ကြားလွှာ
ရှမ်းပြည်နယ်တွင် (၆)နှစ်အတွင်း မူးယစ်ကင်းစင်ရေး ဆေ...
ကြိမ်ဝါး လုပ်ငန်းရှင် အချို့ လုပ်ငန်း စွန့်ခွာ
လာအိုနိုင်ငံ ဗီယန်းကျန်းမြို့တွင် ကျင်းပပြီးစီးခဲ့...
အသေးစားရွေလုပ်ငန်းရှင်များနှင့် ရွှေလုပ်သားများမှ ဆ...
ဘာသာကွယ်၊ လူမျိ်ုးပျောက်မည့် အန္တရာယ်အား ကာကွယ်နိုင...
ဦးခင်ညွန့် လူမြင်ကွင်း ခပ်စိပ်စိပ် ပြန်ထွက်လာ
ရတနာပုံ Online Payment Gateway ၀န်ဆောင်မှုလုပ်ငန်း...
နိုင်ငံရေး လူပ်ရှားသူ တစ်ဦးမှ ရခိုင်ပြည်သို့ တင်သွ...
သစ်အလုံးလိုက် ပြည်ပတင်ပို့နေခြင်းကို ၂၀၁၄ ခုနှစ်မှ...
ဆက်သွယ်ရေးဝန်ဆောင်မှုကို ပုဂ္ဂလိကသို့ ချထားရာတွင် နေ...
မီးပူဖြင့် ကပ်ခံရသော အိမ်ဖေါ်မလေး နောက်ဆက်တွဲ ( ရုပ...
သူတို့ တွေတောင် ပြောနေပြီ
ရွှေလီမြစ်က ကျွန်းပြဿနာ ကုမ္ပဏီနှင့်လူထု သဘောတူညီမှု...
ကျောက်တော်မြို့ အဓိကရုဏ်းတွင် ဒဏ်ရာရသူများ နှင့်ေ...
ဟင်္သာတ-ဇလွန် အဝေးပြေးလမ်းမကြီးတွင် ယာဉ်တိုက်မှုဖြစ်...
မန်းရှိ အသက်၁၂၀ ပြည့်အဖွားအားး ဂင်းနစ်စံချိန်ဝင်...
ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် ပြန်လည်ရှင်သန်ဖွံဖြိုးရေးနှင့် တ.က...
"မီဒီယာအား နှင့် အားလုံး ၀ိုင်းဝိန်းကူညီကြပါ"
ရခိုင်ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် အတွင်းရေးမှူး ဦးစောမော...
ကျောက်တော်တွင် စစ်တပ်က ပစ်ခတ်၍ ၄ ဦးသေ၊ ၁၂ ဦး ဒဏ်ရာ...
“စမ်းသပ်သန်းခေါင်စာရင်း နေရာ ၂၀ တွင် ကောက်ယူမည်”
ငြိမ်းချမ်းရေး နှင့် ပွင့်လင်းလူ့အဖွဲ့ အစည်းဖော်ဆေ...
ရခိုင်အမျိုးသားများကို မြန်မာစစ်တပ်မှ ပစ်ခတ် သတ်ြ...
ကျောက်တော်မြို့နယ်တွင် စစ်တပ်မှ ပစ်ခတ်သောကြောင့် ရ...
တိုင်းပြည်အကျိုးရှိစေမည့် မြန်မာလူမျိုး နှင့် တိုင...
ရင်ကြားစေ့ရေး ငြိမ်းချမ်းရေးက လက်ငင်းအဓိက လိုအပ်ချ...
မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြုပ်နှံမှု ကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးစ...
ကျန်းမာရေး တက္ကသိုလ် ကွင်းဆင်းဌာန၌ ကျန်းမာရေးမှူး တ...
ပုသိမ် NLD သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲပြုလုပ်
မိုးထိမိုးမိရွှေလုပ်သား ရန်ကုန်တွင် ဆန္ဒဖော်ထုတ်မည်
နော်ဝေး၊ ဒိန်းမတ် သံရုံးတွေ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဖွင့်...
၁၄ ပြည်နယ် ပြည်ထောင်စုကို လက်မခံကြောင်း SNLD ပြော
နိုင်ငံတကာ လူသားချင်း စာနာထောက်ထားမှု အကူအညီများ လက...
ဥပဒေ အကောင်အထည်ဖော်မှု အားနည်း၍ ပြဿနာကြုံရ ဟု ALP ဆ...
တူရကီ C-130 လေယာဉ် ၂ စင်း ဘာကြောင့် မြန်မာပြည်ရောက...
ရခိုင်ပြည်နယ်ကို စစ်အုပ်ချုပ်ရေး ကြေညာဖွယ် ရှိကြော...
ရခိုင်ပြည်နယ် အရေးကိစ္စ နှင့် စပ်လျဉ်း၍ နောက်ကွယ်မှ...
ရခိုင်ပြည်နယ် အစိုးရအဖွဲ့ သတင်းထုတ်ပြန်ရေးနှင့် မှ...
ရခိုင်ပြည်နယ် နောက်ဆုံးအခြေအနေ သတင်းထုတ်ပြန်မည်
OIC အား တုံ့ပြန်မှုများကြောင့် မင်းပြားပြဿနာ စတင်ခြ...
တူရကီနိုင်ငံ မှ စစ်လေယာဉ် ၂ စီး ဆိုက်ရောက်ခဲ့ခြင်း...
၂၄ နှစ်ပြည့် SNLD ပါတီမွေးနေ့ အထိမ်းအမှတ်မိတ်ဆုံစာ...
"လွယ်ဟိန်း ကုမ္ပဏီ ၏ Brand Ambassador ဖြစ်သွားတဲ့ န...
ပဋိပက္ခ ဖြစ်ပွားခဲ့ရာ နေရာများမှ လှေများဖြင့် ထွက်ေ...
တူရကီနိုင်ငံ မှ စစ်ဘက်သုံး လေယာဉ်နှစ်စီး အောက်တိုဘ...
Rakhine Straight Views မှ သတင်းဖေါ်ပြချက်များ အား သ...
ကိုယ်ချင်းစာစိတ်ထား လူသားများ - နာရေးကူညီမှုအသင်း(ရ...
နိုင်ငံတော်သမ္မတ ဦးသိန်းစိန် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၊ ဒ...
‎"ရခိုင်ပြည်နယ် အရေး အရေးကြီးအဆို ကို ဒေါ်အောင်ဆန်း...
ရမ်းဗြဲမြို့နယ်တွင် လုံခြံရေးတင်းကျပ်ထားသော်လည်း မ...
မော်လမြိုင်မြို့ ဈေးကြိုဖက်ခင်းရပ် ငန်းတေးလမ်း အိ...
နိုင်ငံတော် သမ္မတ အနေဖြင့် ကုရ်ဘာရီပြုလုပ်မှုနှင့် ပ...
အောက်တိုဘာလ ၂၆ ရက်နေ့ (ယနေ့) တွင် ပြုလုပ်မည့် ပြည်...
လက်ပံတောင်းရှိ ကပ်ကျော်စေတီတော်များ ရွှေသင်္ကန်းလှူဒါ...
တိုက်ခိုက်မူများ ရပ်တန့်ကြရန် ပြည်ပအခြေစိုက် ရခိုင...
နိုင်ငံတော် သမ္မတရုံး မှ သတင်း ထုတ်ပြန်ချက် ထုတ်ပြ...
ALL THAT IS BANNED IS DESIRED – World Conference o...
ဘင်္ဂလီအရေး သမ္မတကြီး စကားတည်ဖို့ ရဟန်းရှင်လူများ ဆန္ဒ...
ရခိုင်အရေး ရခိုင်ဘုန်းတော်ကြီးများ ဆန္ဒထုတ်ဖော်
မြန်မာနိုင်ငံတက္ကသိုလ် ခရစ်ယာန် ကျောင်းသားသမဂ္ဂ ရပ်တ...
လက်ပတောင်းတောင် စီမံကိန်းမှ တာဝန်ကျ ရဲသားနှစ်ဦး နယ...
မီဒီယာသမားများ ဖြောင့်မတ်တဲ့ ဂုဏ်ကို ဆောင်ဖို့ ဒေါ်...
ရသေ့တောင် တွင် စစ်တပ်က ပစ်ခတ်၍ ၂ ဦးသေ၊ ၉ ဦးဒဏ်ရာရ
နိုင်ငံတွင်း တရားဥပဒေ စိုးမိုးရေးအတွက် ဂျပန်နိုင်င...
ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် ဖြစ်ပွားနေသော အကြမ်း ဖက်မှုများ န...
ရခိုင်တိုင်းရင်းသားများ ကိုယ်စား ပန်ကြားချက်
ပြောရေးဆိုခွင့် အာဏာပိုင်အဖွဲ့များ မရှိတော့ဟု ပြန်...
ကိုရီးယားနိုင်ငံ၊ Bucheon City Council မှ Presiden...
ရသေ့တောင် ညောင်ပင်ကြီးရွာ ပဋိပက္ခ ၂ ဦးသေဆုံး ၁၀ ဦး ...
မန်းဈေးချို ရွှေဆိုင်တန်း ရာပြည့်အထိမ်းအမှတ် ရာပြည...
ဗိုလ်မှူးချုပ်ဟောင်း အောင်ကြီး ကွယ်လွန်
"သမ္မတ နှင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အသက်ရှည်စွာ ပြည်သူ ...
အောက်တိုဘာလ ၂၅ ရက် ယနေ့တွင် ပြုလုပ်မည့် ပြည်သူ့လွှတ...
လာဘ်ပေးလာဘ်ယူ မှု နှင့် အဂတိလိုက်စားမှု သတင်းများ ...
မြစ်ကြီးနားမြို့ လေဆိပ်ရှိ စားသောက်ဆိုင်ခန်း ၁၀ ခန...
လက်ပံတောင်းတောင်ကြေးနီ စီမံကိန်း အပေါ် မြန် မာနိုင်...
ကျောက်တော် ပဋိပက္ခ ရခိုင် (၃) ဦးသေဆုံး
လွှတ်တော် စာကြည့်တိုက် အတွက် စာအုပ်စာတမ်းများ လှူဒါ...
ရခိုင် အရေး နှင့်ပတ်သက်၍ ၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသားများ...
နန်းခင်ဇေယျာ ရဲ့ အနုပညာလုပ်ငန်းကို MTF ကိုင်တွယ်မယ...
ဘာကြောင့် ဇာဂနာ နော်ဝေနိုင်ငံကို ရောက်နေသလဲ
ကျောက်ဖြူမြို့နယ်တွင် ဆူပူအကြမ်းဖက်မီးရှို့မှုများြ...
ယနေ့ (အောက်တိုဘာလ ၂၅ ရက်နေ့) တွင် ကျင်းပမည့် အမျို...
နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား ဟောင်းများ စုပေါင်း၍ အငှားယာဉ်...
ပညာရေး အသုံးစရိတ် ထပ်မံ တိုးမြှင့်မည် ဟု သမ္မတကြီး ...
ယနေ့ညတောင်ကုတ်မြို့သို့ သံတွဲဖက် မှ ဘင်္ဂါလီ(၆)ယောက်...
ကျောက်ဖြူတွင်လည်း မီးဟုန်းဟုန်း တောက်လောင်ပြီ
မောင်တောမြို့နယ် ဖက်ဝန်းချောင်းကျေးရွာ စိုးရိမ်ဖွယ...
ရခိုင်ပြည်တွင် ယခုဖြစ်ပေါ်နေသော ပဋိပက္ခများ အမြန်ဆုံ...
စစ်တွေတွင် လက်နက်မျိုးစုံဖမ်းဆီးရမိသတင်း မှာ မှန်...
အစိုးရနှင့် ရွှေလီတွင် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရန် KIO သဘောတ...
''ယခုနောက်ဆုံး မငြိမ်မသက်မှုများ ဖြစ်ပွားလျက်ရှိသော...
ရခိုင်အရေး သုံးသပ်ချက်ပါရှိသော သ၀ဏ်လွှာအား ပယ်ဖျက်ေ...
သီလ၀ါ အထူးစီးပွားရေးဇုန် အများပိုင်ကုမ္ပဏီ ရှယ်ယာမျ...
၀န်ကြီးဌာန သုံးခုပိုင် စက်ရုံ၊ မြေကွက်များကို ပုဂ္ဂ...
"ပုသိမ် NLD မှ နုတ်ထွက်မည့် ပါတီဝင်များ မည်သည့် အလ...
လွှတ်တော် ဘတ်ဂျက်၊ စီမံကိန်းနှင့် အခွန်အကောက်အကြောင...
တကွဲတပြား ဖြစ်နေသော မိသားစုဝင်များ နှင့် အဆက်အသွယ်...
မန္တလေး- လားရှိုးလမ်းချဲ့ထွင်ရာ၌ နားအိုက်ခန်းဒေသခံမျ...
နိုင်ငံတော်လုံခြုံရေးကို ထိပါးနှောင့်ယှက်ခြင်းမှ က...
ကချင်ငြိမ်းချမ်းရေး ဆွေးနွေးရန် ရက်ပြောင်းရွှေ့ သတ်...
စည်ပင်မှ မင်းဓမ္မပန်းဥယျာဉ်ကို ပြောင်းရွှေ့ခိုင်းရာတ...
ကလေးမြို့ရေနံလုပ်သားများ ဆန္ဒဖော်ထုတ်ပွဲ အစီအစဉ်ခွင...
အလုပ်လက်ရှိ၊လက်မဲ့ လူဦးရေစာရင်း ၂၀၁၅.၁၆ တွင် ကောက်...
ဒီမိုကရေစီအား သွေဖယ်ကာ ရပ်မိရပ်ဖများ လျာထားဟုဆို
မြင်ရခဲတဲ့ ရှားပါး မှတ်တမ်းပုံတစ်ခုပါ။
ဂျွန်ဟော့ပ်ကင်း တက္ကသိုလ်ခွဲ ရန်ကုန်တွင် ဖွင့်ရန် စ...
လွတ်လပ်ခြင်း အနုပညာ ရုပ်ရှင်ပွဲတော် ပြိုင်ပွဲဝင် မ...
မြန်မာနိုင်ငံတွင် ၁၉၈၈ ခုနှစ်မတိုင်မီ ပြည်ပကြွေးမြ...
ဒီမိုကရေစီကို လိုလားသူတိုင်း ဒီမိုကရေစီနှင့် မကိုက...
နိုင်ငံတော်သမ္မတ နှင့် ပြည်တွင်းမီဒီယာများ တွေ့ဆုံပ...
မဟာဗန္ဓုလ ပန်းခြံအဆင့်မြှင့်တင် ဆောင်ရွက်မှုများ ပြု...
အစ္စလာမ် ဘာသာဝင်များ ဆန္ဒပြမည့် အစီစဉ် ပျက်
နိုင်ငံတော်သမ္မတကြီး ၏ မီဒီယာအပေါ် ထားရှိသော သဘောထား...
မီဒီယာအား ကြောက်နေသေးသော ဌာနများရှိနေဆဲ
ပြေတီဦး၊ အိန္ဒြာကျော်ဇင်နဲ့ သမီးလေးတို့ ပြုတဲ့ကံ ပဲ...
မြန်မာ့ပညာရေးပြုပြင်ပြောင်းလဲမှု ADB နှင့် သြစတြေးလ...
ပုသိမ်မြို့က ပါတီဝင်အချို့ နှုတ်ထွက်မှု ဒီချုပ် နာယက...
မောင်ကျော်မင်း (အသက် ၂၂နှစ် ) ကွယ်လွန်မှုဖြစ်စဉ်နှ...
ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်း အောက်တိုဘာလ ၂၂ ရက်နှင့် ၂၃ ရက်...
ဦးဝီရသူ ၏ စာအုပ်မိတ်ဆက်ပွဲ
UNFC နှင့်အမြန်တွေ့ဆုံလိုသည်ဟု ဝန်ကြီးဦးအောင်မင်း ...
ပြည်ပနိုင်ငံ ၂၀၀ ကျော်ကနေ အမ်အိုဘီဘဏ်ကို ငွေလွှဲနို...
မြန်မာဝမ်ပေါင် ၏ ပတ်ဝန်းကျင် အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲအာ...
ရခိုင်ပြည်နယ် အစိုးရ ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ ဒေသတည်ငြိမ်...
မြောက်ဦး/မင်းပြား ပဋိပက္ခကြောင့် ဒဏ်ရာရသူ အချို့ စစ...
နှုတ်ထွက် ပုသိမ် NLD များအား ၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသားမ...
မြန်မာ နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ အစ္စလာမ်ဘာသာရေးအဖွဲ့ကြီး ...
အစိုးရအဖွဲ့ နှင့် ကေအိုင်အေ တို့ နိုင်ငံရေး ဆွေးနေ...
Norwegin-Burma Committee မှ Mr.Audun နှင့် Informa...
ပြင်သစ်နိုင်ငံ၊ပါရီမြို့အခြေစိုက် Women Forum (Eco...
ရခိုင် ပဋိပက္ခများတွင် သေဆုံးခဲ့သူများအတွက် ဆုတောင်...
နိုင်ငံရေးအရ မလိုလားတဲ့ သူတွေကို ဆင်ခြေပေးပြီး ဖမ်...
မိမိ နေအိမ်ကို မီးရှို့ပြီး ပဋိပက္ခဖန်တီးသူ ဘီင်္ဂလီမျ...
အနောက်ပိုင်းခရိုင် ဈေးများဌာနရှိ စည်ပင်ဝန်ထမ်းအား...
လွပ်လပ်ရေးကျောက်တိုင် မြေနေရာပြန်လည် ရရှိရေး နှင့်...
မြောက်ဦးတွင် ပဋိပက္ခမှုကြောင့် လူ ငါးဦး သေဆုံး
ကျောင်းသား သမဂ္ဂဆိုတာ ရှိကိုရှိရမယ် ဟု ဒေါ်အောင်ဆန်း...
နိုင်ငံတော်အား နှောင့်ယှက်ဖျက်ဆီးလိုသူများ၏ ဘေးအန္တ...
ဘက်စုံ လွှမ်းခြုံနိုင်သော ပညာရေးကဏ္ဍ လေ့လာသုံးသပ်ရေး...
သမ္မတကြီး ပြောကြားခဲ့သော ပြည်သူလူထု ကသာ လိုလားပါက ဒ...
နိုင်ငံခြား မတည်ငွေရင်းအချိုး ကို နှစ်ဖက်သဘောတူညီခ...
သမ္မတလောင်း အရည်အချင်းများ နှင့် ပတ်သက်၍ ဒေါ်အောင်ဆန...
မြန်မာကိုယ်စားပြုအလှမယ် နန်းခင်ဇေယျာ အောက်တိုဘာလ ၂...
ရခိုင် ပဋိပက္ခပြန်ဖြစ်လာသည့် ကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍ မေးမြ...
မြောက်ဦးတွင် မီးရှို့မှု ထပ်မံဖြစ်ပွါး
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နှင့် UN ၀န်ထမ်းအဖွဲ့ တွေ့ဆုံ
အသက် ၇၅ နှစ်အဖွားအို တစ်ဦး အဓမ္မပြုကျင့်ခံရ
စိန်နှင့် ရွှေထည်ပစ္စည်းများ ခိုးယူခံရမှုကြောင့် အလြှ...
မြောက်ဦး နှင့် မင်းပြားတွင် ညမထွက်ရ အမိန့်ထုတ်
နန်းခင်ဇေယျာ အောက်တိုဘာ ၂၃ ရက်နေ့ ပြန်ရောက်မည်
ဒီမိုကရေစီရေး စဉ်ဆက်မပြတ် လှုပ်ရှားမှုအင်အားစု သတင်း...
ပြည်သူများ၏ ကျန်းမာရေးကုန်ကျစရိတ်အကာအကွယ်ပေးရန် စီ...
နိပွန်TV သတင်းဌာန၏ မေးမြန်းချက်အပေါ် နိုင်ငံတော်သမ္မ...
ကျိုက်ထီးရိုးဘုရား အမှီပြု၍ အဂတိလိုက်စားနေမှု အရေးယ...
အင်းလေးဖောင်တော်ဦးဘုရား၊ ရုပ်ပွားတော်မြတ်များ၊ ညော...
မင်းပြားမြို့ ပဋိပက္ခ မြောက်ဦးမြို့နယ်အထိ ကူးစက်
အနာဂတ်တွင် တိုင်းရင်းသားများ တန်းတူအခွင့်အရေးရရှိေ...
အခြေအနေအရ မင်းပြားမြို့နယ်နဲ့ မြောက်ဦးမြို့နယ်ကို ...
မာရမာကြီး အသင်း ဥက္ကဌ ဆန္ဒပြ၍ ခံဝန် လက်မှတ် ရေးထိုးရ...
DVB သတင်းထောက်နှင့် ကျောင်းသားမိဘတို့အား အပြစ်ရှိ...
ပုဂံဘုရားနယ်မြေအတွင်း အဆောက်အဦးများ တည်ဆောက်နေမှုအေ...
ကျော်သူ ကိုလည်း မယုံနဲ့ - နာရေးကူညီမှုအသင်း(ရန်ကုန်...
ရခိုင်ဒေသ အတွင်းသို့ မွတ်ဆလင်များ ၀င်ရောက်လာခြင်းန...
လက်ပံတောင်းတောင် ကြေးနီသတ္တုတွင်း စီမံကိန်း တည်ဆောက...
လောကနန္ဒာ စေတီတော်မြတ်ကြီးအား ဘက်စုံမွမ်းမံရေး အဝေး...
မင်းပြားမြို့ မီးရှို့တိုက်ခိုက်မူနှင့် နောက်ဆုံး ...
ငွေစက္ကူအဟောင်းများ နံပါတ်ရှိပါက အသစ်ပြန်လဲပေးလျက်ရ...
နေပြည်တော်ရှိ အလုပ်သမားများ လစာမရမှုများ ရှိနေ
ဒုတိယအကြိမ် လွတ်လပ်ခြင်း အနုပညာရုပ်ရှင် နှင့် ဂီတပ...
ရွှေပြည်သာ စက်ရုံအလုပ်သမား ၅၀၀ခန့် မနက်ဖြန် ဆန္ဒဖော်...
ရခိုင်ပြည်နယ် မင်းပြားမြို့နယ် ၊ ပန်းမြောင်း သရက်အ...
ထိုင်းလုလင်ပျိုတို့ အမျိုးသမီးအသွင်နဲ့ တင်ပြမယ့်ပဲ...
Facebook ပေါ်တွင် မှူးဇော် အမည်ဖြင့် ရေးသာနေသူ ဗိုလ...
မြန်မာကိုယ်စားပြု အလှမယ် နန်းခင်ဇေယျာ Miss Interne...
မြန်မာနိုင်ငံတွင် ပိတ်ပင်ထားသည့် တက္ကသိုလ်ကြီး ၃ ခု...
Miss International 2012 ပြိုင်ပွဲတွင် မြန်မာနိုင်င...
တောင်းဆိုချက် ငါးချက်ပါသော ဆန္ဒထုတ်ဖော်မှု တောင်ကုတ်...
ကချင် ပဋိပက္ခ အပေါ်နိုင်ငံတော် သမ္မတ အမြင်
သတင်းမီဒီယာ သမားများ အမှတ်တရ ဓါတ်ပုံ
နိုင်ငံတော်သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်နှင့် ပြည်တွင်းမီဒီယာမျ...
NLD CEC (retired) ဦးလွန်းတင် ကွယ်လွန်
JAC နှင့် ကုန်သည်ကြီးများ ကုမ္ပဏီတို့ သဘောတူလက်မှတ်...
မန်းတွင် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းဆွေးနွေးပွဲ ပြုလုပ်...
Samsung နှင့်တွဲထုတ်သော Google- Chromebook ထွက်ရှိ...
မောင်တောမြို့နယ် လူစုလူဝေး လုံခြုံရေး တပ်ဖွဲ့ဝင်မျ...
နယူးယောက်ရောက် မြန်မာတိုင်းရင်းသားများ OICရုံးရှေ့...
နိုင်ငံတကာ အဖွဲ့အစည်း များ၏ ကူညီ ပစ္စည်းများကို ပြည...
ဘဏ္ဍာရေး နှစ်ဝက် မြန်မာနိုင်ငံ၏ ကုန်သွယ်မှုပမာဏ အမေရိ...
စီးပွားရေးဖွင့်လှစ်မှုနှင့်အတူ ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍ၌ အရည်အသွေး...
၁၉၆၂ ခုနှစ် ပုံနှိပ်သူများနှင့် ထုတ်ဝေသူများ မှတ်ပ...
ရေနံတင်ဆိပ်ကမ်း အပါအဝင် လေဆိပ်နှင့် အိမ်ရာများ ပါဝ...
နိုင်ငံတော် သမ္မတကြီး သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ ပြုလုပ်မည...
၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသားများ ၏ ငြိမ်းချမ်းရေး နှင့် ပ...
ပါတီတခုရဲ့ ဥက္ကဌလုပ်ပြီး နိုင်ငံရေး ကင်းရှင်းရမည်ဆု...
မုံရွာ အောင်ချမ်းသာ အ.ထ.က(၄)ကျောင်းမှ ဆရာမတစ်ဦး ကေ...
ဗြိတိန်ဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်း တိုနီဘလဲ သမ္မတဦးသိန်းစိန်...
မြေပုံမြို့တွင် မွတ်ဆလင် ရပ်ကွက် မြို့ပြင်ထုတ်ရန် ...
ရသေ့တောင်တွင် လူသတ်မူ ဖြစ်ပွား
မြေပုံ၊ မင်းပြား နှင့် ကျော်ဖြူမြို့တို့တွင် လူထုဆ...
နိုင်ငံတော် သမ္မတ ကြီးနှင့် သတင်းမီဒီယာများ တွေ့ဆုံ...
၂၀၁၄ ခုနှစ် သန်းခေါင်စာရင်း အထိမ်းအမှတ် (Logo) အတွ...
Miss နန်းခင်ဇေယျာ People's Choice ဆု ရရှိ
စစ်တပ်ကလယ်မြေသိမ်းမှုလယ်သမားတွေတိုင်ကြား ( ရုပ်သံ-သ...
ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံး စစ်ရေးလေ့ကျင့်မှုကို လေ့လာရန် မြန်မာ...
ကိုမင်းကိုနိုင် ရွှေရတု မွေးနေ့ အမှတ်တရ ထိန်လင်း ကု...
ဂျပန်နိုင်ငံ အိုကီနာဝါကျွန်းမှာ ကျင်းပနေတဲ့ နိုင်င...
မြန်မာပြည် ၁၉၈၀ ခုနှစ် နှစ်ဦးပိုင်းတွင် ခေတ်တသစ်...
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အိန္ဒိယ နိုင်ငံသို့ သွားမည်
ကိုမင်းကိုနိုင် ရွှေရတု မွေးနေ့ အမှတ်တရ
ကိုမင်းကိုနိုင် တက်ရောက်တဲ့ နှင်းဆီကမွှေးစာအုပ်မိတ်...
အခွန်တော်တိုးမြှင့်မှု တကိုယ်တော် ဆန္ဒပြ
တကယ်တော့ မင်းကိုနိုင် ၏ ရွှေရတု
ပညာရေး အကူအညီ လိုအပ်နေသူ ကျောင်းသူလေး တစ်ဦး
ဗိုလ်တစ်ထောင် ဆိပ်ကမ်း၌ ရေပေါ်ဟိုတယ်ဧရိယာ တည်ဆောက်ခ...
ကျေးတောသားလေး မှသည် သမ္မတကြီးအဖြစ်သို့
သမိုင်းဝင်အဆောက်အဦးများ ဟိုတယ်မဖြစ်ရေး ရှေ့နေများက...
ကျောင်းသားသမဂ္ဂနောက်ခံ “နှင်းဆီကမွှေး”ဝတ္ထုစာအုပ် (ဒု...
လက်ပန်တောင်းတောင် ပြည်သူညီလာခံ ကျင်းပ
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အတွက် ဂျပန်ငြိမ်းချမ်းရေးဆု
ဗုဒ္ဓ ပွင့်ထွန်းခဲ့ရာ မဟာဗောဓိ ညောင်ပင် အသက်ဆက်ပြီး...
မြစ်ကြီးနား တက္ကသိုလ်ဝင်းအတွင်း တက္ကသိုလ်ကျောင်းသား၊...
နိုင်ငံတော် သမ္မတ ဦးသိန်းစိန် သည် ပြည်တွင်း၊ပြည်ပ မ...
၉၆-၉၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသားများ၏ လက်ပန်တောင်းကြေးနီ ထ...
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်က နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ...
ထိန်လင်း ကုသိုလ်ဖြစ်ဆေးခန်း ဆိုင်းဘုတ်တင်ပွဲ
ယနေ့(အောက်တိုဘာလ ၁၈ ရက်နေ့) တွင် ကျင်းပမည့် ပထမအကြ...
ပထမအကြိမ် ပြည်သူ့လွှတ်တော် ပဉ္စမပုံမှန် အစည်းအဝေး ပထ...
သတ္တုတွင်းဝန်ကြီးဌာနနှင့် The Voice ဂျာနယ် အမှုကို ဒ...
ဒီကနေ့ ကျွန်တော်တို့အစိုးရဟာ သန်း(၆၀)သော ပြည်သူတွေ...
ကရင် အမျိုးသား အစည်းအရုံး (KNU) သည် လာမည့် အောက်...
၃၂ ခုမြှောက် NLD ရုံး ရခိုင်က ချင်းကျေးရွာတွင် ဖွင...
ကချင်ပြည်နယ် ရှေ့တန်းစစ်မျက်နှာပြင်ရှိ တပ်မတော်တပ်...
ကိုရီးယားလေကြောင်းလိုင်း ဖိတ်ခေါ် ဓာတ်ပုံပြိုင်ပွဲ ...
ထိုင်းနယ်စပ်ရှိ မြန်မာလုပ်သားများ ကျန်းမာရေးအာမခံခ...
ကျမတို့ရဲ့ မြစ်မခ ၀က်ဆိုက် တိုက်ခိုက်ခံရတာ နှစ်ကြိ...
မြန်မာအစိုးရ ကို OIC ဖြေရှင်းချက်တောင်း
ပြည်ပသို့ Viber စနစ်ဖြင့် ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုများကို လို...
ပထမဆုံး ရောင်စုံမြန်မာ့အလင်း ကို မြန်မာ့အလင်းသတင်း...
ဟိုတယ်အဖြစ် လုပ်ကိုင်ခွင့်ရခဲ့သည့် စုပေါင်းရုံးနှင...
ချင်းစာပေ နှင့် ယဉ်ကျေးမှုကော်မတီ ဆွေးနွေးပွဲ ( ရုပ...
ထိုင်းရေနံကုမ္ပဏီ PTT မြန်မာနိုင်ငံတွင် တစ်နှစ်လျှင...
Viber ဆော့ဖ်ဝဲကိစ္စ ဝေဖန်သံများညံနေ
ကော့သောင်း၌ ကျောက်မီးသွေးစက်ရုံ ရပ်တန့်ရေး ဆန္ဒထုတ်...
မြန်မာပြည်က Mobile ဖုန်းတွေ Viber , Skype , Pfingo...
"နိုင်ငံကူးလက်မှတ် အတွက် အခွန်ကင်းထောက်ခံချက် မကြာ...
ဂျပန်နိုင်ငံမှ ပြန်လည်ပေးအပ်မည့် ချေးငွေအစီအစဉ်မျာ...
သို့ / အယ်ဒီတာ ခင်ဗျာ ...( ပေးစာ )
တရားရေးဆိုင်ရာ အဆောက်အဦး များ မှုလအတိုင်း ပြန်လည် ထ...
ဂျာမဏီတွင် မြန်မာဗုဒ္ဓဘာသာဘုန်းကြီးကျောင်း ဖြစ်မြော...
Surface Tablet ဈေးနှုန်း Microsoft ထုတ်ပြန်ကြေညာ
ကရင်ပြည်နယ် ကော့ကရိတ်မြို့နယ်၊ နဘူးတောင်ကျေးရွာမှာ...
KNU ဗဟိုဦးစီး ကော်မတီဝင် ဖဒိုဒေးဗစ်ထော ကွယ်လွန်ခြင...
အလုပ်သမား သမဂ္ဂအလံနဲ့ လိုဂိုသက်မှတ် ( ရုပ်သံ-သတင်း ...
အလုပ်လက်မဲ့ ဖြစ်နေရတဲ့ ဒို့ပြည်သားကစားကွင်းမှ အလုပ...
ရခိုင့်အရေး နှင့် ပက်သက်၍ ဒေါက်တာအေးမောင် နှင့် တေ...
ရှမ်းလူမျိုးများ ဆိုင်ရာ ညီလာခံ ကျင်းပရန် ကြိုးပမ်...
ကျောင်းသားခေါင်းဆောင် ကိုသက်ဝင်းအောင် ကျဆုံးခြင်း ...
ပါတီလုပ်ငန်းမလုပ်ဆောင်ဘဲ ပါတီဥက္ကဋ္ဌ အဖြစ်ရှိနေခြင်းသ...
ကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ၏ ပထမအကြိမ် ညီလာ...
ကျိုက်ထီးရိုးဘုရား ဆိုင်ခန်းရရှိရေးအတွက် ဒေသခံပြည်...
ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံဖြိုးရေးပါတီ ဗဟိုေ...
မြန်မာနိုင်ငံကြက်ခြေနီအသင်းရုံး၌ OIC ရုံးခန်း ဖွင့...
အင်းလေးဖောင်တော်ဦးဘုရား ရုပ်ပွားတော်မြတ် လှည့်လည်ပ...
မြစ်မခ၏ ဆောင်းပါး ကို ဧည့် လမ်းညွန်အသင်း ကန့်ကွက်
သတင်းထောက် Bertil Lintner ၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသားမျာ...
တရားဝင် လယ်ယာမြေလုပ်ပိုင်ခွင့် လက်မှတ်ရရှိမှ ၂၀၁၂ ...
ကွယ်လွန်သူ ဗိုလ်မှူးချုပ်ဟောင်း ကျော်ဇောအား ရည်စူး...
ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီ ဥက္ကဋ္ဌ၊ ဒုဥက္ကဋ္ဌနှင့် တွဲဖက်အထွေထွေ...
မြန်မာနိုင်ငံသို့ ၁၂ နှစ်ခန့် လေကြောင်းပျံသန်းမှု ရ...
NLD နာယက ဦးတင်ဦး မအူပင်ခရီးစဉ်
ကိုယ်စားများစွာဖြင့် ရုပ်ရှင်သူရဲကောင်းဆုရှင် - နာ...
ဉာဏ်အလင်းဖြင့် ဘဝပုံဖော်နေသူများ - နာရေးကူညီမှုအသင်...
စစ်တွေတွင် စုံစမ်းစစ်ဆေးရေး အခြေစိုက်ရုံး ဖွင့်ရန်...
အင်္ဂလန်၊ ဒိန်းမတ်၊ ဂျပန်၊ ဗီယက်နမ်၊ တရုတ်(တိုင်ပေ)န...
ရုံးဖွင့်ခွင့် သဘောတူလက်မှတ် ရေးထိုးထားပြီး ဖြစ်ြေ...
အောက်တိုဘာ ၁၆ ရက်တွင် ကော့သောင်းမြို့၌ ကျောက်မီးသေ...
လယ်တီ ဆရာတော် ကျောင်းဆောင်ကို ဖျက်စီးခဲ့ခြင်း မရှိ...
OIC ဆက်ဆံရေးရုံးများ ဖွင့်လှစ်ရန်ကိစ္စမှာ ပြည်သူ့ဆန...
၀ါးခယ်မမြို့၊ကျုံမငေးမြို့ နယ်မှ ဆက်သွယ်ရေးအဆင့်(၃...
တရားဥပဒေ စိုးမိုးရေးနှင့် တည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးကော်မ...
ကော့မှူး မဲဆန္ဒနယ် ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဒေါ်ေ...
ဒီမိုကရေစီရေး စဉ်ဆက်မပြတ်လှုပ်ရှားမှု အင်အားစု ကုန်ေ...
နိုင်ငံတော် ရသုံးမှန်းခြေငွေစာရင်း ( ရုပ်သံ-သတင်း ...
ရှေ့နေများ တရားဝင် ဆန္ဒပြခွင့်ရ
အိုအိုင်စီရုံး အလိုမရှိကြောင်း ရခိုင်ပြည်နယ် အနှံ...
တအောင်းဒေသ ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် စပ်လျဉ်းပြီး ပြည်သူ...
ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီ ပါတီစွဲထားနေသည်ဟူ၍ နိုင်ငံရေးအသ...
မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ အမျိုးသားအရေး လှုပ်ရှားမှုေ...
ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် စိတ်ပညာဌာန အငြိမ်းစားပါမောက္ခ ဆရာမြ...
မြန်မာနိုင်ငံတွင် OIC ရုံးစိုက်ခွင့်မပြုရန် မန္တလေး...
ပြည်ပနိုင်ငံများသို့ တရားမဝင် ခေါ်ဆိုမှုများ ပြုလုပ်...
ဘူးသီးတောင်တွင် OIC အလိုမရှိ ဆန္ဒထုတ်ဖော်မှုများ ပြု...
OIC အလိုမရှိ ရန်ကုန်မြို့၌ ဆန္ဒထုတ်ဖော်
OIC အလိုမရှိ စစ်တွေမြို့တွင် ဆန္ဒထုတ်ဖော်
ပါတီတွင်း ဒီမိုကရေစီစနစ် ပီပြင်စွာကျင့်သုံး၍ ဖွဲ့စ...
မြန်မာနိုင်ငံ တက္ကသိုလ်များတွင် WiMax အင်တာနက် စနစ်...
OIC ရုံးဖွင့်မည်မဟုတ်ကြောင်း ငြိမ်းချမ်းစွာ ဆန္ဒဖော...
ဖဒိုစောဒေးဗစ်ထော ၏ ဈာပနာအား ကေအင်န်ယူဌာနချုပ် သေေ...
မြန်မာနိုင်ငံတွင် OIC ရုံးဖွင့်လှစ်ခွင့်ပြုမထားဘဲ ...
ကရင် အမျိုးသား အစည်းအရုံး (KNU) ခေါင်းဆောင် စောဒေး...
နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကဒ် ပြုလုပ်သူများထံမှ ရွာလူကြီးအ...
ရခိုင်ကျောင်းသားသမဂ္ဂ နှင့် လူထုတွေ့ဆုံပွဲအခမ်းအနား...
NLD လူငယ်ဖွံ့ဖြိုးရေး သင်တန်းကျောင်းဆင်းပွဲ
တကယ်ရောက်ခဲ့ပြီ - နာရေးကူညီမှုအသင်း(ရန်ကုန်)
ဒီမိုကရေစီစနစ်သည် အများကြိုက်ကြသော စနစ်ဖြစ်သကဲ့သို...
နိုင်ငံတော် သမ္မတရုံးမှ ညွှန်ကြားရေးမှူး ဦးဇော်ဌေးက ...
လူ့အခွင့်အရေး လမ်းလျှောက်ပွဲမှာ ကိုကိုကြီး မိန့်ခွ...
တိုက်ကြီးမြို့နယ် B-G သွေးအကူအညီပေးရေး၏ လှူဒါန်းပြ...
ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ခွင့်ရရန် ဒေါ်အောင်...
ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီ အထွေထွေညီလာခံသို့ သမ္မတဦးသိန်းစိ...
ကညွတ်ကွင်းမြို့ မှာ ဖောက်ထွင်းမှုတွေ ဆက်တိုက်ဖြစ်ပွ...
ပိုးဒါလီသိန်းတန်နှင့် သူမ၏ဖခင် အဆိုတော် မြန်မာပြည်...
နစ်နာရသောကျောင်းသားတို့၏ မိဘများမှ စာနယ်ဇင်းရှင်းလ...
ရမည်းသင်းမြို့တွင် မွတ်စလင်များနှင့် ဘုန်းကြီးများ...
လူငယ်များ စုပေါင်း၍ ကိုယ်ပိုင်အသိစိတ်ဓါတ်ဖြင့် အုပ...
အမေရိကန်နိုင်ငံအခြေစိုက် The Carter Center မှ Cons...
ကချင်လူမျိုး MMA Figher Aung La N Sang နှင့် ရွှေ...
မြန်မာ့ရုပ်ရှင်နေ့ ဂုဏ်ပြုအခမ်းအနား စတင်ကျင်းပ
ရခိုင်တက္ကသိုလ် ကျောင်းသားများ ဆန္ဒထုတ်ဖော်ပွဲ နှင့်...
SSPP နှင့် အစိုးရတို့ ဆက်လက် တိုက်ပွဲဖြစ်ရန် အနေအထ...
ကရင် အမျိုးသား အစည်းအရုံး (KNU) ခေါင်းဆောင် ဒေးဗစ်...
တက္ကဆက်ပြည်နယ် အမာရီလိုမြို့ တွင် ရွှေညဝါ ဆရာတော် အထ...
မြန်မာနိုင်ငံ၌ သီးခြား နိုင်ငံခြားဘဏ်လုပ်ငန်း လုပ်...
မြန်မာနိုင်ငံက တင်နေတဲ့ အကြွေး ဒေါ်လာ သန်း ၉၀၀ ကို ...
EVA လေကြောင်း ရန်ကုန်-တိုင်ပေ ခရီးစဉ် ပြန်လည်ပြေးဆ...
KIA နှင့် ငြိမ်းချမ်းရေး ဆက်လက်ဆွေးနွေးရန် အစိုးရက...
ကျပ်သိန်း တစ်ရာခန့် တန်ဖိုးရှိ မြန်မာအရက်များ နတ်ြ...
FTUB နှင့် အလုပ်သမား၊ လယ်သမားအဖွဲ့အစည်းများတွေ့ဆုံ...
နိုင်ငံတော် ရသုံးမှန်းခြေ ငွေစာရင်းဆိုင်ရာ ဆွေးနွေ...
၁၄ နှစ်အရွယ် ကလေးငယ်ကို ရိုက်နှက် စစ်ဆေးမှု ပဲခူးတွ...
မြိတ်မြို့တွင် အုပ်စုဖွဲ့ပြီး ကားများ၊နေအိမ်များနှ...
မြန်မာနိုင်ငံတွင် OIC ရုံးစိုက်မည် မဟုတ်ဟု နယ်စပ်ေ...
စစ်တွေမြို့ ဆူပူမှု မိုးပေါ် သေနတ်ထောင်ပစ်ပြီး လူစုခ...
ရခိုင်တစ်မျိုးသားလုံး ကိုယ်ပိုင်ပြဌါန်းခွင့် နှင့်...
ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် ပြည်ထောင်စုစနစ် ဖော်ဆောင်ရန်လိ...
ရခိုင်ရဟန်းတော် သီရိလင်္ကာနိုင်ငံတွင် ပါရဂူဘွဲ့ ရရှိ...
ပြည်ပနိုင်ငံ (၂၀၀) ကျော် နှင့် ချိတ်ဆက် ငွေလွှဲနိုင...
လေ့လာရေးခရီးစဉ်နှင့်ပတ်သက်၍ မပြန်ခင် ထွန်းအော်ကျော...
တရားစီရင်ရေး နဲ့ လာဘ်ပေး လာဘ်ယူ နဲ့က လုံးထွေး ရစ်ပ...
(၉၂) ကြိမ်မြောက် မြန်မာ့ရုပ်ရှင်နေ့အခမ်းအနား ကျင်း...
ပြည်တွင်း လူမှုရေး လုပ်ငန်းများမှာ ပါဝင် ဆောင်ရွက် ...
မြေလွတ်မြေရိုင်း နည်းဥပဒေရေးဆွဲသင့်သည့် အချိန်မဟုတ...
စစ်တွေတွင် ဟိန္ဒူများကို ဘင်္ဂလီမူဆလင်များအကြမ်းဖက်
စစ်တွေလူထု ဆန္ဒပြ တောင်းဆိုပွဲ ထပ်မံ ပေါ်ပေါက်
Danger မူးယစ်ဆေးအဖွဲ့မှ မြိတ် ရဲတွေ နှင့် အုပ်ချုပ...
လက်ပံတောင်းတောင်စီမံကိန်းရပ်ရန် ရွာသားများက သင်္ချို...
တရုတ်မြန်မာနယ်စပ်ရှိ ကန်ပိုက်တီတံတားကို တရုတ်က ပြန...
လူမှုဖူလုံရေးဥပဒေသစ်အကောင်အထည်ဖော်ရေး မန်းတွင် ဆွေ...
နာရေးကူညီမှုအသင်း (ရန်ကုန်)၏ ရပ်တည်ချက်နဲ့ ဖြတ်သန်...
မြန်မာနိုင်ငံတွင် OIC ရုံးခန်းဖွင့်လှစ်မည်ကို ကန့်...
ရခိုင်ပြည်နယ်နှင့် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးရှိ ဒေသအခ...
၂၀၁၂ ခုနှစ်အတွက် ငြိမ်းချမ်းရေးနိုဗယ်ဆုကို ဥရောပသမ...
အမေရိကန်လက်ထောက်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး William Burn...
ညမထွက်ရ အမိန့်ကို ဖြေလျှော့သော်လည်း လုံခြုံရေး အြေ...
ရန်ကုန်တွင် ဆာလဖျူရစ် အက်ဆစ် ပြင်းပါသော ငရုတ်ဆီထုပ...
မသန်စွမ်းသူများအနုပညာပြပွဲ ( ရုပ်သံ-သတင်း )
ဒါနရှင်တို့၏ ပေါင်းကူးရာ - နာရေးကူညီမှုအသင်း(ရန်ကုန...
မြန်မာ့အကြွေးများ ဂျပန် ကူရှင်းပေးမည်
မြန်မာက ငါးဖမ်းသမား ၂၈၉ ဦး ဘင်္ဂလာဒေခ်ျ့က ကယ်တင်
၂ဝ၁၂ နိုဘဲလ်ငြိမ်းချမ်းရေးဆု မည်သူရမည်နည်း
ပြည်ပဘဏ်များကို ပြည်တွင်း၌ ဖွင့်လှစ်ခွင့်ပြုထားခြင...
၂၀၁၂ ခုနှစ် အတွက် စာပေဆိုင်ရာ နိုဗယ်ဆုကို တရုတ်စာေ...
Facebook အခုလ 15ရက်နေမှာ ပိတ်တော့မည်ဟု အတည်ပြု သတင...
ပြည်တွင်း ပုဂ္ဂလိကဘဏ်အချို့ ကျေးရွာများအထိ ဘဏ်ဝန်ဆေ...
ယုဇန ဆီအုန်း စက်ရုံကို တရားစွဲမည့် အစီစဉ် ပျက်ပြယ်...
နိုင်ငံပိုင်သတင်းစာများ လာမည့်အောက်တိုဘာလ ၁၈ ရက်မှ...
တယ်လီဖုန်းခေါ်သံကို သီချင်းသံဖြင့်ပြောင်းလဲပေးသည့် ...
၂၀၁၅ စိန်ခေါ်မှု ပြင်းထန်မည်ဟု ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီ ပြော...
ရှားခဲအင်းကိစ္စအား ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်တွင် ...
ထားဝယ် ပါတီ ထူထောင်ရန် စီစဉ်
ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံ ကမ်းခြေကို မုန်တိုင်း ဝင်ရောက်...
နိုင်ငံတကာမယ်ပြိုင်ပွဲဝင်တဲ့ နန်းခင်ဇေယျာ အနိုင်ရဖ...
ဒေါက်တာဆ လိုင်းလျန်မှုန်းဆာခေါင်း မြန်မာနိုင်ငံသို့...
ဆွီဒင် ၀ါရင့်သတင်းထောက် ဘာတေးလ်လစ်တနာ ပြည်ဝင် ခွင့...
စစ်တွေမြို့တွင် ညမထွက်ရအမိန့် ပုဒ်မ ၁၄၄ ကို လျော့ေ...
K N L A စစ်ဦးစီးချူပ် ဗိုလ်ချူပ်ကြီး မူတူးစေးဖိုး ...
ကျပ်နှစ်သိန်းဖုန်း လာမည့်ဧပြီတွင် ဈေးလျှော့ရောင်း...
စစ်တွေမြို့ ရခိုင်အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ ဆန္ဒထုတ်ဖော်( ဓ...
မြန်မာသမ္မတအဆက်ဆက် နိုဘယ်ဆုအတွက် ဦးသိန်းစိန် ပထမဆုံ...
နော်ဝေနိုင်ငံတွင် နိုင်ငံသားအဖြစ် ခံယူထားသူ ချင်းတ...
ရေစကြိုမြို့နယ်၊ ရှစ်အိမ်တန်းကျေးရွာတွင် မြစ်ကမ်းပ...
လူ့ဘောင်သစ်ပါတီ ပြည်တွင်းတွင် ပြန်အခြေချမည့် ပထမဆု...
ခင်ပွန်းနေရာအပြောင်းအရွှေ့ ငွေလိုက်သည့် ဒု ရဲမှူးကေ...
ရဲဘော်သုံးကျိပ်ဝင် ဗိုလ်မှုးချုပ်ဟောင်းကျော်ဇောသည် ...
တာဝန်မဲ့ရေးသားသော အင်တာနက်ဝက်ဘ်ဆိုက်အချို့နှင့် Fa...
မြန်မာအနေနှင့် နိုင်ငံတကာအသိုင်းအ၀ိုင်းတွင် ပြန်လည...
အားကစား ဂျာနယ်များ ထိန်းကျောင်းပေးရန် ပြန်ကြားရေး ...
ရခိုင် အမျိုးသမီးများ ဆန္ဒပြရန် လျှောက်ထားမှု ကန့်သတ...
အစိုးရတပ်နှင့် KIA မုန်းဂိုးဒေသတိုက်ပွဲတွင် အစိုးရ...
ဖားကန့်တွင် တိုက်ပွဲဖြစ် ကျောင်းသား ၃၀၀ ခန့် ၃ နာရ...
မြန်မာနှင့် တောင်ကိုရီးယားနှစ်နိုင်ငံကြား ရင်းနှီး...
မြောက်ဥက္ကလာ NLD ရုံးဖွှင့်ပွဲ ( ရုပ်သံ-သတင်း )
‘ဆိုင်းစုမှသည် မန်ဟိုင်းဆီသို့’ စာအုပ် စာနယ်ဇင်းရှ...
စုမေတ္တာ အခမဲ့ အထွေထွေ ရောဂါကု ဆေးခန်း ( ရုပ်သံ-သတင...
ဒီချုပ် အမျိုးသားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးသိမ်းဆွေနှ...
၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသားများရုံးသို့ ဒိန်းမတ်နိုင်ငံရ...
မလေးရှား နိုင်ငံ၏ အကြီးမားဆုံး ဆက်သွယ်ရေး လုပ်ငန်း...
ယနေ့နေ့လည် ၁ နာရီအချိန် တွင် စစ်တွေမြို့ အောင်မြေက...
Generation Wave (မျိုးဆက်သစ် လူငယ်များ) ၅နှစ်ပြည့်...
စစ်တွေတွင် သံဃာတော်များနှင့် မြို့မိမြို့ဖများ ဆန္ဒ...
ကာချုပ်နှင့်အဖွဲ့ ‘ဝ’ နှင့် မိုင်းလားအား မူးယစ်ဆေး...
တိုင်းရင်းသားပဋိပက္ခများနှင့် ပတ်သက်၍ ဒေါ်အောင်ဆန်းစ...
လူထုခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အမေရိကန်ခရီးစဉ်...
နိုင်ငံတော်သမ္မတ ဦးသိန်းစိန် တောင်ကိုရီးယားကို ရောက...
ရခိုင်ပြည်နယ် မောင်တောမြို့နယ်တွင် ထုတ်ပြန်ထားသည့်...
US to YANGON Shopping ဝန်ဆောင်မှုတစ်ခု Facebook စာမ...
၂၀၁၃ အတွင်း မိုဘိုင်းဖုန်းမှတစ်ဆင့် ဘဏ်လုပ်ငန်း ချ...
မြန်မာသမ္မတ ဦးသိန်းစိန် ယခုနှစ် နိုဘယ်ငြိမ်းချမ်းရေ...
မြန်မာကို ဥပမာ ပေး၍ တောင်ကိုရီးယား သမ္မတက မြောက်ကို...
Generation Wave (မျိုးဆက်သစ် လူငယ်များ)၏ ၅ နှစ်ပြည...
လူငယ်ဖွံ့ဖြိုးရေးသင်တန်းသို့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် လာ...
KNLA စစ်ဦးစီးချူပ် ဗိုလ်ချူပ်ကြီး မူတူးစေးဖိုး ထုတ...
သတင်းစာများက သမိုင်းကို ပြောနေကြသည် ( ရုပ်သံ-သတင်း...
နိုင်ကျဉ်းအဖွဲ့ဝင်တွေ နိုင်ကျဉ်းမိသားစုဝင်တွေကို လ...
တတိယနေ့အဖြစ် ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှအရေး သံဃာတော်များ ဆန္ဒပြ
စားကျက်ပျောက်သွားသော ကျွဲနွားများ ( ရုပ်သံ-သတင်း )...
သမ္မတ တာဝန် ယူရဲသည်ဟု ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ပြော
လက်ရှိအခြေအနေသည် အားလုံးကောင်းသည့်အခြေနေမဟုတ် သေးဟ...
နိုဗယ်ငြိမ်းချမ်းရေးဆု ခန့်မှန်းချက်များတွင် သမ္မတ ...
နိုင်ငံတော် သမ္မတ ဦးသိန်းစိန် သည် ကိုရီးယားသမ္မတနိုင...
ပထမအကြိမ် ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် စတုတ္ထပုံမှန်...
ဥပဒေကြမ်းပူးပေါင်းကော်မတီသည် အောက်တိုဘာလ ၈ ရက်နေ့ ...
အမေရိကန် ခရီးစဉ်နှင့် ပတ်သက်၍ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ...
မန္တလေး သတင်းစာဆရာများအသင်း ကြေညာချက် ထုတ်ပြန်
မစုစုနွေးရဲ့ လယ်သမားသမဂ္ဂဖွဲ့စည်းရေးကော်မတီ ( ရုပ်သ...
ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီ၌ ဥက္ကဌ ရာထူးဆက်ရှိမည် နှင့် ဗိုလ...
အမ်းမြို့ တရားရုံး ဆုံးဖြတ်ချက် မျှတမူ မရှိ၍ ပြည်န...
နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဟောင်းများအဖွဲ့ချူပ် မှစီစဉ်၍ ၈...
ကျေးရွာအုပ်စု အုပ်ချုပ်ရေးမှူးမှ လုပ်ပိုင်ခွင့်အလွ...
မြန်မာ့စက်မှုလက်မှုဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ် အမည်ကို အသေးစားနှ...
ကေအဲန်ယူ ထိပ်ပိုင်းခေါင်းဆောင် ၃ ဦးကို အစည်းအဝေးဆံ...
မြောင်းမြမှ သဌေးတစ်ဦး ရခိုင်ပြည်သို့ ဗုဒ္ဓရုပ်ပွားေ...
ပုဂ္ဂလိကဘဏ်များနှင့် ပတ်သက်၍ ဗဟိုဘဏ်နှင့် ဘဏ္ဍာအခွန်ဝ...
မြန်မာနိုင်ငံအပေါ် ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာပိတ်ဆို့အရေးယူမှု ဖယ...
လွမ်းလို့ကျန်ရစ်ခဲ့ရပြီ အမေ - ကျော်သူ
ဒေါ်ဖြူဖြူသင်း နှင့် ယုဇနပလာဇာဈေးသူ/သားများ တွေ့ဆု...
နာရေး ကူညီမှုအသင်း (ရန်ကုန်) ရဲ့တသောင်းပြည့်တဲ့ အလှ...
အလောင်းမင်းတရားကြီး၏ နှစ်ပေါင်း ၂၅၀ ကျော်သက်တန်းရှ...
တရားစွဲသည် ဆိုလျှင် တိုင်းဝန်ကြီးချုပ် ကတိပျက်ကြော...
ကမ္ဘောဇဘဏ် မှ ကျပ်သိန်းတစ်ထောင် ထုတ်လာသူ လုယက် တိုက...
ရိုဟင်ဂျာ များအတွက် OIC က ဒေါ်လာ ၂၅ သန်း ကောက်ခံရရှ...
တပ်စခန်းရွှေ့ပေးရန် SSPP/SSA အား သျှမ်းပြည်အစိုးရ န...
ရန်ကုန်မြို့တော် စည်ပင်သာယာနယ်နိမိတ်အတွင်းရှိ ပုဂ္ဂ...
အခက်အခဲဆုံးကာလကို ကျော်ဖြက်ရတော့မယ်လို့ ဒေါ်အောင်ဆန...
လယ်သိမ်းခံ လယ်သမားများအရေး ထိရောက်စွာ ဆောင်ရွက်ပေး...
ကချင်ပြည်နယ်တွင်း ကိစ္စ သမ္မတ ပြောကြားချက်အပေါ် KNO တ...
ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် သံရုံးရှေ့တွင် ဗုဒ္ဓဘာသာ ရဟန်းတော်များ...
စစ်တွေ၊ မြောက်ဦးနှင့် ဝေသာလီတို့အား ပြည်ပခရီးသွားမ...
သမ္မတ ဦးသိန်းစိန် တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံသို့ ချစ်ကြည...
လက်ပံတောင်းတောင် စီမံကိန်းနှင့် ပတ်သက်ပြီး အခေါင်း...
ပြန်ခေါ်သက်သေများ စစ်ဆေးမည်ဖြစ်သော်လည်း ခရိုင်ရုံးက...
ပရဟိတမှတ်တိုင် - နာရေးကူညီမှုအသင်း (ရန်ကုန်)
အတူလက်တွဲ ပေးဆပ်ခြင်း - နာရေးကူညီမှုအသင်း(ရန်ကုန်)
အရေးပေါ်အတွက် အသင့်အနေအထား - နာရေးကူညီမှုအသင်း(ရန်ကု...
မြန်မာ့ရုပ်ရှင်နေ့တွင် ‘မြဂနိုင်’ အသံတိတ် ရုပ်ရှင်...
CDMA 800 MHz ဖုန်း အင်တာနက်လျှောက်ထားခွင့် ရပ်ဆိုင...
ဇေကမ္ဘာကုမ္ပဏီ၏ တရားစွဲဆိုမှုအား အောက်တိုဘာလ (၁၁) ရက်...
ဧရာဝတီကို ကယ်တင်ခြင်း တစ်နှစ်ပြည့်အထိမ်းအမှတ် ဆွေး...
ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှတွင် ဘုန်းကြီးကျောင်းများနှင့် အိမ်မျာ...
လယ်သမားများအရေး ထိရောက်စွာ ဆောင်ရွက်ပေး ( ရုပ်သံ-...
ရခိုင်အရေးခင်းကြောင့် မီးလောင်ဆုံးရှုံးသူများအတွက် ...
၄ နှစ်ခန့်လေကြောင်းပျံသန်းမှုများ ရပ်နားထားသည့် ကာတ...
အာဏာပိုင်လို့ မခေါ်ပါနဲ့ … တာဝန်ခံလို့ ခေါ်ပါ
၈၈ မျိုးဆက် ငြိမ်းချမ်းပွင့်လင်းခရီးစဉ် (သာစည်မြို...
နေ ပြည်တော် မြို့တွင် ကာယိနြေ္ဒနှောင့်ယှက်မှု ၊ အလို...
ကန်တော်မင်္ဂလာပန်းခြံအတွင်းရှိ အမှိုက်ပုံ၌ ကာဘိုင် ကျ...
စက်မှု ဇုန် ၇ ခု ထပ်မံတိုးချဲ့မည်
နိုင်ငံတော် သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်သည် ကိုရီးယားသမ္မတနိုင်...
ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှအကြမ်းဖက်မှု သံဃာတော်များ UN ရုံးရှေ့ဆန...
တပ်ရင်းမှူးအဆင့် နစက-BGB နယ်စပ်ကိစ္စ တွေ့ဆုံဆွေးနွေ...
၈၈ မျိုးဆက် ငြိမ်းချမ်းပွင့်လင်းခရီးစဉ် (သဲတော)
အိမ်ဖြူတော် ကွန်ပြူတာစနစ် တိုက်ခိုက်ခံရ
RFA Burmese TV October 3, 2012
ဖားကန့်မြို့အနီး၊ ဆိပ်မူကျေးရွာအုပ်စု၊ ဖားပြင်ကျေး...
သင်္ဃန်းကျွန်း ဘ၀မြင့်မှတ်တိုင်အနီး မီးလောင်ကျွမ်းမှု...
အောက်တိုဘာ ၄ ရက် (ကြာသပတေးနေ့)တွင်
Eleven Media Group ကို အာရှသတင်းကွန်ရက် (ANN) ၏ အဖ...
အလုပ်သမားအဖွဲ့ နှစ်ဖွဲ့ အချင်းချင်း ပြန်ပြီး ဆန္ဒပြ...
မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကမ...
ဖားကန့်မြို့ပေါ်တွင် မှားယွင်းပစ်ခတ်မှုကြောင့် သေဆုံ...
တပ်မတော်သာ ဒီမိုကရေစီလမ်းကြောင်းပေါ်တွင် မားမားမတ်မ...
ပုဇွန်တောင်မှာ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် ရုံး...
RFA Burmese TV October 2, 2012
လျှို့ဝှက်ထားသော iPad Mini ဓာတ်ပုံများ ထွက်ပေါ်လာ
ကုန်ကြမ်းပစ္စည်းများ တင်သွင်းလာသော ကွန်တိန်နာ တစ်လံ...
ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှအရေး သံဃာတော်များ ဆန္ဒပြ ( ရုပ်သံ-သတင်း...
စည်ပင်နဲ့ သမဝါယမ ပြဿနာ ( ရုပ်သံ-သတင်း )
လောပီတ ရေအားလျှပ်စစ် စီမံကိန်းတလျောက်ရှိ မြေမြှပ်မ...
၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသားခေါင်းဆောင် မင်းကိုနိုင်ဦးဆော...
အင်းစိန် မိုးကောင်းကင် အထည်ချုပ်စက်ရုံ အလုပ်သမားမျ...
မိုးပြာဂိုဏ်းမှ ဘုန်းကြီးတစ်ပါးအား တရားစွဲဆိုထားရာ...
Mother ကုမ္ပဏီအရာရှိက အုတ်စက်ဝန်ထမ်းကြီးတစ်ဦးအား ဒူ...
Apple ကထုတ် တဲ့ iOS6မှာ ပါဝင်လာသော နည်းပညာအသစ်မျ...
စက်တင်ဘာလ ၂၅ ရက်နေ့ကို ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နေ့အဖြစ်...
ယခုနှစ် စံချိန်တင် မိုးရွာသွန်းမှုကြောင့် မန္တလေးမြ...
အာရှနဂါး (MMM)အထည်ချုပ်စက်ရုံအလုပ်သမားများ ဆန္ဒထုတ်...
မိတ္ထီလာမြို့ တွင် ၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသားများ၏ပွင့်လ...
ရွှေဂတ်စ် ပိုက်လိုင်းကို ရပ်ဆိုင်းထားရန် အဖွဲ့အစည်း...
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး အဖျောက်ဒေသမှ ဧရာဝတီမြစ်ရေကို ...
ငါးနှစ်တာကာလအတွင်း ရန်ကုန်မြို့ စက်မှုဇုန်များရှိ စ...
KNU နှင့် KNLA မကွဲ၊ ခေါင်းဆောင်ပိုင်း ပြဿ နာများရ...
ပလောင်အမျိုးသား လွတ်မြောက်ရေး တပ်မတော် အပါအ၀င် ပူး...
အောက်တိုဘာလ (၂) ရက်နေ့ RFA မနက်ပိုင်း အသံလွှင့်အစီအ...
မြောင်းတကာ အမက အောင်မင်္ဂလာ(မြောင်း)ကျောင်းမြေ (၁)ဧက...
ဧရာဝတီ မြစ်ရေ မြင့်တက်မှုကြောင့် မတ္တရာမြို့နယ်အတွင်...
နာရေးကူညီမှုအသင်း(ရန်ကုန်) မှ နာရေးအရေအတွက် ၁၂၀၀၀၀ ...
ကချင်ငြိမ်းချမ်းရေး ကွန်ရက်က ခေါင်းဆောင် ဦးမရန်ဂျေ...
ရန်ကုန် ကွန်ပျူတာ တက္ကသိုလ် ကျောင်းသားတွေက သမ္မတဆီေ...
ချင်းတွင်းမြစ်ကမ်း အနီးက လက်ပန်းတောင်းတောင် ကြေးနီ...
အောက်တိုဘာလ ၁ ရက်နေ့ RFA - TV အစီအစဉ်
အောက်တိုဘာလ ၁ ရက်နေ့ RFA ညပိုင်း အသံလွှင့်အစီအစဉ်
Messenger News Journal ၏ အသိပေးကြေညာခြင်း
KNU ခေါင်းဆောင် စောဘဦးကြီး အကြောင်းစာအုပ် မြန်မာနိ...
ဧရာဝတီကို ကယ်တင်ခြင်း တစ်နှစ်ပြည့် အထိမ်းအမှတ် အော...
ပထမအကြိမ် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် ပဥမ ပုံမှန်အစည်းအဝေး...
ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံ ကော့ဇ်ဘာဇာ ဒေသတွင် မီးရှို့ဖျက်...
လက်ပံတောင်းတောင်နဲ့ ချင်းတွင်းအလှ သဘာဝ ကာကွယ်ထိန်း...
( သတင်းတို ) ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံ ကောက်စ်ဘဇားရှိ ...
အောက်တိုဘာလ (၁) ရက်နေ့ RFA မနက်ပိုင်း အသံလွှင့်အစီအ...
အမေရိကန်စစ်တပ်မှ နည်းပညာနှင့် အတတ်ပညာများကို ရယူသွ...
မီဒီယာများ လက်ဆောင်ယူသင့် မယူသင့် မန္တလေးတွင် ဆွေးေ...
ယုဇနဆီအုန်းစက်ရုံ နှင့် ပတ်သက်၍ငြိမ်းချမ်းစွာ စီတန...
မြင်းကပါရွာ အရုပ်သွင်းပွဲ ၌ ဗိုလ်ချုပ်နှင့် ဒေါ်အေ...
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နှင့် ဆန်ဖရန်စ္စကို မြန်မာ မိသား...
နိုင်ငံတော် သမ္မတ ဦးသိန်းစိန် အား ပြည်သူလူထုက သောင်...